> Resource> YouTube> Olee bulite Photos ka YouTube
Ka anyị nile maara, YouTube dị ukwuu n'ihi na-ekere òkè videos. Ma, ọ pụkwara-eji na-bulite foto na ike slideshows na sekọnd ole na ole. Usoro bụ incredibly mfe:
Abanye n'ime gị YouTube akaụntụ na pịa Bulite. Mgbe ahụ ịnyagharịa n'elu ka Photo ngosi mmịfe na pịa Mepụta. Na mmapụta elu windows, họrọ photos ị chọrọ bulite. Ị nwere ike ma na-foto site foto albums ma ọ bụ gị na kọmputa.
Mgbe ahụ, pịa Next ma họrọ ọdịyo track n'ọbá akwụkwọ n'okpuru Audio ma ọ bụ nne Mmetụta Ọ dịghị audio mee ka gị na ngosi mmịfe play enweghị music. I nwekwara ike ịtọ slide oge na tinye ngosi mmịfe mmetụta ma ọ bụ mgbanwe ma ọ bụrụ na-amasị gị.
Mgbe ị na-mere, pịa Bulite na-abanye na nkọwa ma ọ bụ mkpado ọmụma. Ị nwere ike ịtọ gị ngosi mmịfe ka onwe ma ọ bụrụ na ị na-adịghị chọrọ ịkọrọ ndị ngosi mmịfe na uwa dum.
Ma si n'elu na anyị maara na YouTube nanị na-enye ụfọdụ isi ọrụ maka ngosi mmịfe Ndinam. Na ọ na-adịghị ekwe ka ị bulite ọdịyo faịlụ site na kọmputa gị. Ya mere, ihe ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime ka ndị ọzọ ahaziri ngosi mmịfe maka YouTube? Lee, m ukwuu nwere ike ikwu ihe dị mfe na-eji ngosi mmịfe onye na uploads gị oru ngo ozugbo na YouTube, nke ahụ bụ Fantashow! Nnọọ na-eso nzọụkwụ n'okpuru iji hụ otú ị nwere ike bulite foto YouTube site na-eke a kediegwu ngosi mmịfe.
1 Nbanye na ma họrọ ọkacha mmasị gị video ịke
Na mbụ ị kwesịrị ị na ibudata na-agba ọsọ Fantashow. Ọ bụrụ na ị na-adịghị a Wondershare akaụntụ, pịa debanye n'elu-nri akuku edebanye otu akaụntụ. Ọ bụrụ na ị na-ama nwere otu, dị nnọọ pịa Nbanye na na-abanye na gị adreesị email gị na paswọọdụ ka malitere.
Mgbe ahụ ị ga-aga na Style taabụ. Ebe i nwere ike ịhọrọ site n'elu 200 premade nkiri ekwekọghị maka dị iche iche n'oge dị ka agbamakwụkwọ, ụbọchị ọmụmụ, njem, Ista na ndị ọzọ. Ihuchalu mmetụta na pịa Mee na-amalite na-eke gị onwe gị ngosi mmịfe.
2 Tinye ọzọ onye aka gị video
Mgbe ahụ, ị ga-aga na hazie taabụ iji tinye ihe ọcha gị video. Ebe i nwere ike na-agagharị na ikpuru na dobe foto gị ka akụkọ osisi. Mgbe ahụ okpukpu abụọ pịa lekwasịrị faịlụ ka akuku, tinye mmetụta ma ọ bụ ka oge.
N'adịghị ka YouTube, ị nwere ike tinye gị onwe gị music site na kọmputa. Iji mee nke a, dị nnọọ aga Audio taabụ na ikpuru na dobe ọdịyo faịlụ na ala nke usoro iheomume.
E wezụga nke ahụ, ị ​​nwekwara ike ịgbanwe gị video ịke ma ọ bụ itinye ihe ekwekọghị mee ka gị na n'ụlọ nkiri ọzọ anya-akụta.
3 Bulite foto YouTube
Ọ bụrụ na ihe niile bụ ihe OK, dị nnọọ kụrụ Export na ị ga-enwe ike ịhụ na preset mmepụta usoro nke YouTube Video esesịn esịne ke Fatanshow na gị mma. Niile i nwere ime ugbu a na-jupụta na akaụntụ gị ozi na pịa Share. Mgbe ọtụtụ minit, gị video ga-kpọmkwem uploaded jidesie YouTube.
Enwe a sample kere site Fantashow:
A Great Curation nke 100 Funny YouTube Comments
Olee otú Chọta na Download YouTube Full Movies
YouTube Music Player - Play YouTube Videos Dị ka Songs